कोरोनाकाे कलहले निन्द्रा उडेको काठमाडौँ बासीहरुलाई फेरि अर्को यस्तो दुखकाे खबर, ले मर्माहत बनाएको छ – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोनाकाे कलहले निन्द्रा उडेको काठमाडौँ बासीहरुलाई फेरि अर्को यस्तो दुखकाे खबर, ले मर्माहत बनाएको छ
कोरोनाकाे कलहले निन्द्रा उडेको काठमाडौँ बासीहरुलाई फेरि अर्को यस्तो दुखकाे खबर, ले मर्माहत बनाएको छ
कोरोनाकाे कलहले निन्द्रा उडेको काठमाडौँ बासीहरुलाई फेरि अर्को दुखकाे खबर, उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा गरेकै दिनदेखि तरकारी र फलफूल मूल्य झन्डै ८० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार बुधबारको तुलनामा बिहीबार मुख्य तरकारीको भाउ थोकमै १० देखि ८० प्रतिशतसम्म महँगो भएको छ ।।
बजारमा तरकारीको आपूर्ति सामान्य भए पनि माग बढी भएकाले मूल्य बढेको हुनसक्ने अनुमान समितिले गरेको छ । समितिका अनुसार कालीमाटी बजारमा बुधबारका लागि ४७६ मेट्रिक टन तरकारी भित्रिएकोमा बिहीबारका लागि छ सय मेट्रिक टन तरकारी भित्रिँदासमेत भाउ बढेको छ ।।
समितिका अनुसार बुधबार प्रतिकेजी १६५ रुपैयाँ थोकमा बिक्री भएको कागती बिहीबार २९५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ भने प्रतिकेजी ५६ रुपैयाँ थोकमा कारोबार भएको गोलभेँडा ७० रुपैयाँ भएको छ । यस अवधिमा करेला प्रतिकेजी २२ रुपैयाँबाट ३० रुपैयाँ, तामा प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ थोक मूल्यबाट ११० रुपैयाँ पुगेको छ । याे खबर गोरखापत्रमा रहेकाे छ ।।
यस्तै तनेबोडी प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँ थोक मूल्य बढेर ११० रुपैयाँको पुगेको समितिले जनाएको छ । यी तरकारीको भाउ खुद्रा बजारमा अझै छोइ नसक्नुछ । एक दिनमै ८० प्रतिशतसम्म तरकारी महँगो हुनु तरकारी व्यापारीको कालोबजारी भएकाले अनुगमन गरेर कारबाही गरिनुपर्ने बताइएको छ ।।
महामारीपछि विदेशबाट आधा लाख नेपाली स्वदेश फर्किए
पत्रकारमाथी हातपातगर्ने लाखौठगी गरेकी कमला छुटेपछी लक्ष्मणले सम्बन्धित निकायलाइ फोनमै गरे कडा प्रश्न ( पुरा भिडियो सहित ).
Breaking News : नयाँ वर्षमा तीन दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय !
BREAKING NEWS::१ गते देखि फेरि लकडाउन हुने?
अधुरो प्रेम बिर्सन सुशान्तले यति सम्म गरेका थिए, हेर्नुहाेस